lolo miditra tsimoramora - Sina Tianjin Tanggu TWT Valve
Device for mifehy na nanapaka mpanelanelana amin'ny fantsona. Mety ho fitaovana fanaraha-maso ny tahony (DN50 ~ 300), kankana fitaovana, jiro sy ny fitaovana fanaraha-maso pneumatic. Design sy ny orinasa mpamokatra entana fenitra mifanaraka amin'ny API 609. Pressure fitiliana dia araka ny API 598. Ny halavan'ny rafitra dia mifanaraka amin'ny API 609. Side flange fenitra mifanaraka amin'ny GB / T17241 PN1.0MPa, PN1.6MPa sy ASME B16.1 125PSI . Ranon antonony: ny rano, solika, entona sy ny haino aman-jery isan-karazany manimba tsikelikely Nampiasa hafanana: -10 ℃ ~ 120 ℃ Applicabl ...
Device for mifehy na nanapaka mpanelanelana amin'ny fantsona.
Mety ho fitaovana fanaraha-maso ny tahony (DN50 ~ 300), kankana fitaovana, jiro sy ny fitaovana fanaraha-maso pneumatic.
Design sy ny orinasa mpamokatra entana fenitra mifanaraka amin'ny API 609.
Pressure fitiliana dia araka ny API 598.
Ny halavan'ny rafitra dia mifanaraka amin'ny API 609.
Side flange fenitra mifanaraka amin'ny GB / T17241 PN1.0MPa, PN1.6MPa sy ASME B16.1 125PSI .
Ranon antonony: ny rano, solika, entona sy ny haino aman-jery isan-karazany manimba tsikelikely
Amin'ny alalan'ny fampiasana hafanana: -10 ℃ ~ 120 ℃
azo ampiharina tsindry: PN1.0 ~ 1.6MPa
ampiharina size: DN50 ~ DN1200
Connection fomba: clamp karazana
Connection fenitra: GB · ANSI · Din · API · ISO · BS
Hampihenana ny rotational Torque, hanohana ny vatan, ka ataovy hisaraka amin'ny vatana miditra tsimoramora amin'ny fomba mahomby, mampihena ny anaovan'ireo ny miditra tsimoramora SAMPA.
Rehefa avy Nikosokosoka fitsaboana, miaraka amin'ny seza miditra tsimoramora marina tsara.
Mba hanatratrarana aotra leakage ny rivotra tightness fepetra fitsapana, ny fanokafana sy famaranana kely Torque, hanitatra ny fanompoana ny fiainana ao amin'ny fanaovam-panavotana miditra tsimoramora.
SAMPA tombo-kase Tsy mora mba hanaratsy, amin 'izany ny fisorohana ny mahazatra leakage tahony.
Ny jiro modely manana ny tombony sy ny fametrahana mazava tsara ny avo avo hery, ary mety tsara ho amin'ny fametrahana ny tahony sy ny fitaovana fanaraha-maso hafa.
Ny jiro dia mampiavaka modely amin 'izany ny miditra tsimoramora tsorakazo sy ny lovia miditra tsimoramora dia mafy ny miditra tsimoramora ifandraisany amin'ny lovia, ary ny jiro modely manana ny toetra mampiavaka ny fanoherana ny hovitrovitra sy mora fanoloana.
Tsara fivadihana, mora ny mifehy ny fanokafana sy ny famaranana ny miditra tsimoramora lovia.
Ny jiro modely manana ny tombony tsy misy fandatsahan, tensile fanoherana, ny fisorohana sy mora leakage fanoloana.
Previous: Sigle orifce famoahana rivotra miditra tsimoramora
Next: Alatsaho vy Lolo miditra tsimoramora
Electro-hydraulic niasa Butterfly Valve
Extended ampela Lolo Valves
Extended ampela mofo manify Lolo Valves
Pneumatic nodidiana Butterfly Valve
Ny fahadiovana Dn150 Butterfly Valve
ny mofo misy End Type Lolo Valves
Double flange tsy voahozongozona mipetraka hafahafa dibera ...